XOG: Ahlu Suna oo Dacwad ka dhan ah Kheyre u dirtay Farmaajo & Doonis cusub.
DHUUSA-MAREEB(P-TIMES) – Xog soo gaartay Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ku ogaaday in Madaxda Ahlu Suna Waljameeca ay warqad dacwad ah u gudbiyeen Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidaas oo kalena uu dhacay wada hadal telfoon oo dhexmaray Madaxweynaha iyo Hogaamiyaha Ahlu Suna Macalin Maxamuud.
Xogta ayaa sheegaysa in ay Ahlu Suna la kulmeen shalay ra`iisulwasaare Kheyre oo ay kala hadleen halka marinayo tiradda xildhibaada Ahlu Suna qaadanayso ee baarlamaanka Galmudug, taas oo dhawaan markale lagu heshiiyey in ay noqdaan 30 xildhibaan oo ay soo magacaabanayaan.
Ahlu Suna waxay sheegtay in uu Raysalwasaaruhu si cad u sheegay in ay kooxda dadkeedu kasoo jeedaan qabaailada kala duwan ee beelaha Galmudug, ayna ku soo galaan hanaanka beelaha, wixii kasoo harana aysan jirin Asxaab siyaasadeed oo tartan ka dhaxeeyo.
Talaabadaas wey dhibsatay Ahlu Suna mana aysan jecleysan, waxayna go`aansadeen in ay wada hadal iyo fariin u dirsadaan Madaxweyne Farmaajo oo ay is taabacsan yihiin xagga caqiidada Diinta, waana tan sababtay dacwadooda ku wajahan in ay helaan tiradda xubnahooda.
Wada hadalo telfoon oo dhexmaray Madaxda dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay in aysan kasoo bixin natiijo wanaagsan, waxaana Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Raysalwasaaruhu isku afgarteen in arrimaha ku wajahan xildhibaanada ay u taalo beelaha sida ay u kala leyihiin, aysana jiri karin cid siyaasadeed oo xisbi ah.
Raysalwasaare Kheyre oo la hadlayay qaar kamid ah ciidamada Isku dhafka ah ayaa sheegay in aysan macquul aheyn in ay ka tirsanadan dawladda iyo Ahlu Suna, loona baahan yahay in ay noqdaan oo kaliya ciidamo Qaran, taas oo ay Ahlu Suna u aragtay mid kale oo dharbaaxo siyaasadeed ku ah.
Kooxda Ahlu Suna (Suufiyada) waxaa aad uga soo horjeeda beelaha gobalka Galguduud, waxayna u arkaan koox dagaalo ay dhexmareen oo aan istaahilin in ay hab xisbi siyaasadeed ay wax ku helaan, taas aysana marnaba suuragal aheyn.